Egwuregwu ndị ọzọ | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: February 23, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Gini mere eji egwu egwuregwu? Egwuregwu na-egbochi ma na-ewepụ mgbu na-adịghị ala ala, mgbu nkwonkwo, osteoarthritis na mgbu mgbu. Ibelata ibu na-abawanye ...	GỤKWUO
12 ihe ndị e kere eke na-eme ka ụda ụda nụ: ụmụ agbọghọ, ebe a bụ ihe omume 12 iji mee ka ụda olu gị nwee ike ịnweta "ịnyịnya ibu"
Site na: KongoLisolona: January 28, 2020 11: 44 Enweghị asịsa
Imirikiti ụmụ agbọghọ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-achọ ịgagharị n'ihe nkpuchi zuru oke iji mee ka ha dị mma na akpụkpọ anụ a "Skinny Jeans". Ọ bụrụ na ị bụ onye…	GỤKWUO
Di egwu, ma eziokwu, umuaka umuaka ndi a, ndi ozo di elu, si Etiopia bia Afrika: ha gosiputara ihu uwa na ndi ozo di ka ndi nke agburu na ndi ozo di iche iche ... (VIDIO)
Site na: KongoLisolona: March 5, 2019 03: 03 Enweghị asịsa
Omuma ihe mara mma na ihe siri ike nke ihe omume ndi mmadu na acrobatics bu ihe ekwesighi. O ghaghi ihe ihere n’ịbụ onye isi ojii. Ihe ndi ocha n’eme, ndi isi ojii nwere ike.	GỤKWUO
Ihe ịtụnanya ọdịbendị ọdịbendị Africa ise nke enweghị otuto bụ isi ojii / ndị Africa: enwere ọdịnala ọdịnala ndị e nyere ndị ọzọ, mana nke nwere ike bụrụ ndị isi ojii / ndị Africa si
Site na: KongoLisolona: Disemba 19, 2018 06: 34 Enweghị asịsa
Nabata na agbụrụ mmadụ nwere ike ịmalite n'Africa ka ọ bụ ihe siri ike iji rie, n'agbanyeghị ihe àmà dị. Anyị niile na-enye aka na ụdị na ...	GỤKWUO